ခင်ပွန်းသည်တွေ ဇနီးမယားဆီက လိုချင်တဲ့အရာ (၇) ခု... - ThutaStar
၁ . နားလည်မှု
သူတို့အလေးထားလွန်းတာတွေကို ကိုယ့်ဘက်က ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်မိတယ်ဆိုရင် တကယ့်ကွိုင်ပါပဲ။ ဒီလောက်ပေါင်းလာတာတောင် နားမလည်သေးဘူးဆိုပြီး ခံစားချက်အမျိုးမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သူတို့လိုချင်တာ နားလည်မှုပါ။ သူတို့ကို တခြားလူတွေထက် နားလည်တယ်ဆိုတာမျိုးကို လိုချင်တာပါ။
၂ . ခိုင်မာမှု
အမျိုးသားအများစုမှာ သူတို့နှစ်သက်တာ၊ သူတို့စိတ်အားထက်သန်ရာ နယ်ပယ်တွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုနယ်ပယ်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ချီးကျူးပေးတာမျိုး လိုချင်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံကြီးတော့ သူတို့ကို ချီးကျူးမြှောက်ပင့်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကိုယ့်ဘက်က တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သူ့ဘက်က သိရုံပါပဲ။
၃ . လက်ခံမှု
၄ . မငြီးတွားမှု
တစ်ချိန်လုံးငြီးတွားနေတာမျိုးကို မကြိုက်ပါဘူး။ လူသားဖြစ်တာကြောင့် ပင်ပန်းနေတာတွေ၊ အလုပ်ပေါ်အာရုံရောက်နေတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ တကယ်အရေးမကြီးတာကို ငြီးတွားနေတာမျိုးသဘောမကျပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ စကားပြောဖို့ ပုံမှန်အချိန်လေး သတ်မှတ်ထားပါ။ ဒီအချိန်မှာပဲ အလေ့အကျင့်လုပ်ပြီးပြောပါ။
၅ . လေးစားမှု
သားသမီးနဲ့ ဇနီးမယားရဲ့ လေးစားမှုတွေကို အမျိုးသားတွေက အလေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ မလေးမစားပြုမူခံရတဲ့အခါ တချို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်ပြီး၊ တချို့ကတော့ လက်မခံကြောင်းပြတတ်ပါတယ်။ လေးစားမှု ရှိကြောင်းသူ့ကို သိထားစေမှ ကိုယ့်ကိုလည်း တလေးတစား ပြန်လည်ဆက်ဆံမှာပါ။
၆ . ပျော်ရွှင်မှု
ခင်ပွန်းဟာ ကိုယ့်ချစ်သူသာ မကဘဲ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းလိုဆက်ဆံမှုမျိုးဟာလည်း သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပါ။ ဘာမဆို တိုင်ပင်လို့ရတာ၊ ပြောပြလို့ ရတာမျိုးကို သူ့ဘက်က မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာအကြံမှ မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အတွက် သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ရပါတယ်။
၇ . ယုံကြည်မှုအားကိုးမှု